မာမာအေး | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 5
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၅၉) - Mar Mar Aye
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၇၄) - Mar Mar Aye
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၄၈) - Mar Mar Aye
Zaw Aung (Mon Ywa) – ဆင်ခရွန်ကကိုလတ်နဲ့ ၂၀၁၂ စင်ကာပူ၊ မြန်မာအခြေအနေ
ဆင်ခရွန်ကကိုလတ်နဲ့ ၂၀၁၂ စင်ကာပူ၊ မြန်မာအခြေအနေ ဇော်အောင် (မုံရွာ)ဇူလိုင် ၂၁၊ ၂၀၁၂ ကျွန်တော့်မှာ ခင်မင်လေးစားရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။ ၁၉၉၀ခုနှစ်လောက် ကျွန်တော်တို့ အင်ဂျင်နီယာပေါက်စများစွာ မြန် မာပြည်က နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ထွက်လာပြီး စင်ကာပူမှာ သူများမလုပ်ချင်တဲ့...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၃၀) – Mar Mar Aye
မာမာအေးဇူလိုင် ၁၅၊ ၂၀၁၂ မကြာသေးခင်က လန်ဒန်မှာ တွေ့ရတဲ့ ဒေါ်မာမာအေး နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ – Getty Images) သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … No tags...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၂၉) – Mar Mar Aye
မာမာအေး ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၂ (photo – http://mahagita.wordpress.com/) “—-ကနေ့ ဆိုင်းလောကသား ရွာစားကျော်များဟာ ကိုယ့်ဆိုင်း မဟာကိုလဲ လှစေ ကိုယ်တိုင်လဲ ကြည့်ကေါင်းစေ ဆိုတာမျိုး ပြင်ကြဆင်ကြ ယဉ်ကြပြီး...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၂၈) – Mar Mar Aye
မာမာအေး ဇူလိုင် ၁၊ ၂၀၁၂ “—သူတို့တတွေဟာ ကတာလား လှုပ်တာလား မာအေးကတော့ လှုပ်တာလို့ မြင်မိပါတယ်ရှင်။ ဦးခေါင်းကနေပြီးတော့ ခြေဖျားထိ ပစ္စည်း ရှိသမျှ အားလုံး ပြုတ်ကျကုန်မတတ် လှုပ်တတ်လိုက်ကြတာ အံ့ရော –...
စိန်စတင်း မျိုးဆက် / Mar Mar Aye – 427
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၂၇) မာမာအေးဇွန် ၂၄၊ ၂၀၁၂ “—မိတ္ထီလာ အိုလေ ကန်တော်အောက်ဆီကအကို၊ ဖါးပါရင် တကေါင်နှစ်ကေါင်ပေးပါ့ဆိုလို့ ကိုယ်တို့ပျိုတို့လူပျို၊ မောင်လူပျိုရယ် ကိုယ်တို့လူပျို၊ ငယ်ငယ်လေးပါမောင်ရယ် မျက်လုံးကြောင်တေါင် ဖါးကေါင်ကဆို၊ စားလဲစားတယ်သူဆို၊...
Mar Mar Aye – “ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၂၆)
မာမာအေး ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၂“–အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတာ မြောင်းမြသူ ဒေါ်ခင်ကြည့်သမီးဟဲ့ သိရဲ့လား ဆိုပြီး ရိုက်လိုက်— ဒေါ်ခင်ကြည်ဟာ စစ်အတွင်းမှာကတည်းက ဗုံးမကြောက် သေနပ်မကြောက်၊ ဆေးရုံကလူနာတွေကို ပြုစုလာတဲ့သူဟဲ့ – သိရဲ့လား— ကိုယ့်မြို့သူသွေး...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၂၅) – Mar Mar Aye
ရဲနန္ဒ၊ ထိပ်တင်ဝင်း မာမာအေး ဇွန် ၃၊ ၂၀၁၂ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင် … မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ သောတရှင်တို့ရေ...
Mar Mar Aye – 423
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၂၃) မာမာအေး မေ ၂၀၊ ၂၀၁၂ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်က တွေ့ရသော မေဆွိ၊ မြန်မာပြည်သိန်းတန် (ဓာတ်ပုံ – Kha & Mra)“—-မောင်သိန်းတန်တို့ –...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၂၂) – Mar Mar Aye
မာမာအေး မေ ၁၃ ၊ ၂၀၁၂ “— မြမန်းဂီရိသေလာတောင်၊ နန်းတည်ထောင် ဘုန်းရောင် နေညိုလင်း၊ နောင်ညီကို၊ ရွှေဘိုနွယ်တော်ရင်း၊ ရာဆူဆူပြည်သူခ၀ပ်စင်း၊ No tags for this post. Related...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၂၁) – Mar Mar Aye 421
မာမာအေး မေ ၆ ၊ ၂၀၁၂ဇော်မျိုးထွဋ် “—-ပန်းချစ်သူတို့လက်နဲ့ကွယ် ခူးဆွတ်ဖို့ စိုးရွံ့လို့နေတယ်၊ ဆွတ်ယူမယ် ဟန်ပြင်ကါပင် ယုယစွာ ထွေးပွေ့ထားပါမယ် —” No tags for this post. Related...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၂၀) – Mar Mar Aye
မာမာအေး ဧပြီ ၊ ၂၀၁၂ “—- သံသရာ ဆွဲဆန့်လို့ ဘယ်လောက်ပင်ရှည်ရှည်၊ ချစ်သူ့ရင်ခွင်ကြား နားနားနေနေ၊ ရေမြေအလိုက် စိုက်စိုက်ပါလို့ မျောလိုလဲ မျောပါစေ၊ ချစ်သူ့နယ်မြေသည်သာ ငြိမ်းချမ်းနယ်မြေ၊ သစ္စာတရားထွန်းကါးရာ ငြိမ်းချမ်းသာယာသောနယ်မြေ—” No...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၁၉) – Mar Mar Aye
မာမာအေး ဧပြီ ၂၄၊ ၂၀၁၂ “— မြန်မာတို့ ယဉ်ကျေးမှုမှာ သိသာသိစေ – မမြင်စေနဲ့တွေ ရှိတယ်လေ။ ရှောင်နိုင်လေ ကေါင်းလေ လို့ စာစစ်ဘုတ်က မှန်ချက်ပေးတာနဲ့ ‘ဇါဘော်လီကနေ ဆွယ်တာပြာ’ ‘ချိန်ပေးတာ’...
သံသာလေကမ်းတိုင် – Mar Mar Aye
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၁၈) မာမာအေးဧပြီ ၂၁၊ ၂၀၁၂ “—- မာအေးလဲ ဒီဖက် ကမ္ဘာတခြမ်းကို ရောက်လာတော့ အထီးကျန်လိုက်တာ လွန်ရောကိုး၊ ဆွေမျိုးစင်စစ် သီချင်းတွေထဲ နှစ်ထားရင် သက်သာမလားလို့ပေါ့။ ကိုယ့်သီချင်းတွေလဲ...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၁၇) – Mar Mar Aye
မာမာအေး ဧပြီ ၁၆၊ ၂၀၁၂illustration by Win Pe“—-သိန်းသန်းကုဋေ မရေနိုင် ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာကြွယ်၊ စစ်ကိုင်းအနောက်ဖက်တောင်ပေါ်ဝယ်၊ တို့ပစ္စည်းတွေ ရှိနေတယ်၊ နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင် ပါရမီကြွယ်၊ နန်းတော်ရှေ့ကို မေးလာကြရင် သူဋ္ဌေးဝါဒကို ကျနော်ပြောပြလိုက်ပါမယ် xxxနောက်ဆုံးအပိုဒ်ကျတော့...
သစ္စာဦးကဗျာ – Mar Mar Aye poem
မာမာအေး ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၂ * ‘လာပါ – လာပါ’ ခေါ်နေမှာကိုယ်အသိ No tags for this post. Related posts No related posts.
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၁၆) – Mar Mar Aye
မာမာအေး ဧပြီ ၊ ၂၀၁၂ “—မာအေးတို့တတွေ ခုရောက်နေတဲ့ အခြေကလဲ ဆရာတင်တို့ခေတ်က အခြေနဲ့ ပင်ပမ်းချက်တွေ သိတ်ကွာနေမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီတော့ ပျော်ခြေဆိုက်စရာတွေ စ နေတုန်း ဆရာတင့်အပြုံး ဆက်သုံးကြတာပေါ့—” သောတရှင်များ...
“ပြောပြစရာတွေလဲ တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၁၅)
မာမာအေး မတ် ၁၄၊ ၂၀၁၂ “—-အများကြိုက်ဖို့ စစ်တိုက်တာတော့ သခင်တင်ကြီး လုပ်ချင်မယ် မထင်ပါဘူး။ မာအေးလဲစစ်တိုက်ဖို့ မကြိုက်လို့ ‘တိုက်ကြဘို့ပါ’ ကို မရွေးဘူးနော်—” No tags for this post....
မာမာအေး မတ် ၁၊ ၂၀၁၂ “…ဧရာဝတီအရေးကလဲ အေးခဲ့ပြီတဲ့ရှင့်၊ ကိုယ်မောင်ကိုယ်ဖွား သွေးချင်းအစုအဖွဲ့များနဲ့လဲဘဲ၊ နွားကွဲကျားကိုက် မဖြစ်ထိုက်တော့ဘူးလို့ စိတ်ကူးရသယောင်၊ လင်းရောင်တန်းတွေ၊ ဂီတမာလာ ငုံလွှာပန်းတွေ ‘စုလေး’ ခေါင်းမှာ ဝေတဲ့ အခြေအနေတွေလဲ မြင်နေရပါလား…”...
Mar Mar Aye – 412
“ပြောပြစရာတွေလည်း တပုံကြီးရှိသေးတယ်” အမှတ် (၄၁၂) မာမာအေး ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄၊ ၂၀၁၂ သောတရှင်များ ကျန်းမာတော်မူကြပါစရှင်။ မာအေးချစ်တဲ့သောတရှင်တွေ ဂီတ၀ါသနာရှင်တွေအားလုံး မာအေးရဲ့အသံလေး ကြားရတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ No...